လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံစံ… - Real Gaming Myanmar
လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံစံ…
By thant naing /2months ago / Relationship / No Comments
အိမ်ထောင်တခုတည်ဆောက်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကို အဓိကဦးစားပေး မစဉ်းစားမိရင် သာယာစိုပြေတဲံ အိမ်ထောင်ရေးတခုဖြစ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရှောက်ကြဉ်အပ်တဲ့ လူစားမျိုးကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …. ။
1-အမြဲတမ်းနီးပါးစိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။သင်က အချစ်အကြောင်း အလွမ်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ထဆိုးတတ်တာမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါဟာ သူမအတွက် တကြိမ် ဒါမှမဟုတ် အကြိမ်ကြိမ် အသည်းကွဲခဲ့ဖူးလို့ သင့်ရဲ့ အချစ်သင်္ကေတတွေ အချစ်ဝေါဟာရတွေကို လက်မခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာ လူကောင်းတဦးဖြစ်သည့်တိုင် သင့်ရဲ့ စရိုက်ကို လက်မခံနိုင်ပဲ ဒေါသထွက်နေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ….. ။
2-ကိုယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကို စိတ်မဝင်စားတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးကို ရှောင်ပါ။သူတို့ကိုယ်တိုင်သာ သူတို့စိတ်ဝင်စားပြီး သူတို့ပျော်ရွှင်မှုကို မိသားစုအရေးထက် ဦးစားပေးချင်သူ၊သူတို့မပျော်ရွှင်မှုကို မိသားစုအပေါ် အနစ်နာခံ မမြိုသိပ်တတ်သူတွေကို ရှောင်ပါ ….. ။
3-ရုပ်ဝါဒီကိုသာ ဦးစားပေးတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သင့်ရဲ့ မေတ္တာကို အသိအမှတ်ပြုမယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။အရာရာကို စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ငွေောကးပေါ် မူတည်ပြီးတိုင်းတာသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး ….. ။
4-သင်နဲ့ စတွေ့စဉ်ကတည်းက သင့်ကို ကလူကျီစယ်တာ ရဲတင်းတဲ့အမူအရာပြပြီး ပတ်သက်လို့ ချစ်ကြိုက်မိတဲ့သူမျိုးဆို ရှောင်ကြဉ်ပါ။သင့်မှမဟုတ်ပါဘူး။သင့်ထက်သဘောကျစရာလူတွေ့လာရင် သူတို့ဘက်က လက်နှေးနေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီလို အမျိုးသမီးမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ် ….. ။
5-ကပွဲခုန်ပွဲနဲ့ ညပွဲတွေကို ခုံမင်နှစ်သက်သူတွေကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။ညပွဲတွေမှာ မလုံခြုံတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပြီး သောက်တတ်စားတတ်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့အမူအကျင့်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ထက် သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်ဖို့က ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ….. ။
6-ကတိတခုကို လွယ်လွယ်ပေးပြီး လွယ်လွယ်ဖျက်တတ်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ကတိကဝတ်တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အဖြေပေးတတ်ပါတယ်။ဒါဟာ ဥာဏ်ကောင်းလွန်းလို့ မဟုတ်ပဲ လေးလေးနက်နက်မရှိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် …… ။
7-ကိုယ့်လင်ယောက်ျားထက် တခြားသူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို ပိုလိုချင်သူတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။မတူညီတဲ့ ဖက်ရှင်ပြောင်းလဲခြင်း သင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမနေခြင်းနဲ့ သင့်ခံစားမှုကို အလေးအထားခြင်းတွေဟာ သင့်အတွက် လက်တွဲဖော်ကောင်းဖြစ်လာစေမှာမဟုတ်ပါဘူး …… ။
8.အတင်းပြောတတ်သူ အမျိုးသမီးတွေကို ရှောင်ပါ။များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးတိုင်း နောက်ကွယ်က အကြောင်းတခုကို သာမာန်ထက်ပိုပြီး စပ်စုလိုစိတ်ရှိပါတယ်။ဒါဟာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထက်ပိုလာရင်တော့ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ မနာလိုစိတ်တွေနဲ့ သူတပါးမကောင်းကြောင်းသာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ တွင်တွင်ခါအောင် ပြောသူဆို သင့်အတွက်ရော သင့်မိသားစုအတွက်ပါ အဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် …… ။
အိမျထောငျတခုတညျဆောကျဖို့ စဉျးစားတဲ့အခါ ဒီအခကျြတှကေို အဓိကဦးစားပေး မစဉျးစားမိရငျ သာယာစိုပွတေဲံ အိမျထောငျရေးတခုဖွဈဖို့ ခကျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ရှောကျကွဉျအပျတဲ့ လူစားမြိုးကို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ …. ။
1-အမွဲတမျးနီးပါးစိတျဆိုး ဒေါသဖွဈနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ဖွဈပါတယျ။သငျက အခဈြအကွောငျး အလှမျးအကွောငျးပွောတဲ့အခါမှာလညျး စိတျထဆိုးတတျတာမြိုးလုပျတတျပါတယျ။ဒါဟာ သူမအတှကျ တကွိမျ ဒါမှမဟုတျ အကွိမျကွိမျ အသညျးကှဲခဲ့ဖူးလို့ သငျ့ရဲ့ အခဈြသင်ျကတေတှေ အခဈြဝေါဟာရတှကေို လကျမခံတဲ့သဘောဖွဈပါတယျ။သငျဟာ လူကောငျးတဦးဖွဈသညျ့တိုငျ သငျ့ရဲ့ စရိုကျကို လကျမခံနိုငျပဲ ဒေါသထှကျနသေူတှေ ဖွဈပါတယျ ….. ။
2-ကိုယျကလှဲရငျ ဘယျသူ့ကို စိတျမဝငျစားတတျတဲ့ မိနျးမမြိုးကို ရှောငျပါ။သူတို့ကိုယျတိုငျသာ သူတို့စိတျဝငျစားပွီး သူတို့ပြျောရှငျမှုကို မိသားစုအရေးထကျ ဦးစားပေးခငျြသူ၊သူတို့မပြျောရှငျမှုကို မိသားစုအပျေါ အနဈနာခံ မမွိုသိပျတတျသူတှကေို ရှောငျပါ ….. ။
3-ရုပျဝါဒီကိုသာ ဦးစားပေးတတျတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော သငျ့ရဲ့ မတ်ေတာကို အသိအမှတျပွုမယျ့သူတှမေဟုတျပါဘူး။အရာရာကို စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ ငှေောကးပျေါ မူတညျပွီးတိုငျးတာသူတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ လကျတှဲဖျောဖွဈမလာနျိုငျပါဘူး ….. ။
4-သငျနဲ့ စတှစေ့ဉျကတညျးက သငျ့ကို ကလူကြီစယျတာ ရဲတငျးတဲ့အမူအရာပွပွီး ပတျသကျလို့ ခဈြကွိုကျမိတဲ့သူမြိုးဆို ရှောငျကွဉျပါ။သငျ့မှမဟုတျပါဘူး။သငျ့ထကျသဘောကစြရာလူတှလေ့ာရငျ သူတို့ဘကျက လကျနှေးနမှောမဟုတျတဲ့အတှကျ ဒီလို အမြိုးသမီးမြိုးကို ရှောငျသငျ့ပါတယျ ….. ။
5-ကပှဲခုနျပှဲနဲ့ ညပှဲတှကေို ခုံမငျနှဈသကျသူတှကေိုလညျး ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ညပှဲတှမှော မလုံခွုံတဲ့အဝတျတှဝေတျပွီး သောကျတတျစားတတျတဲ့သူတှဟော သူတို့အမူအကငျြ့ကို စှနျ့လှတျဖို့ထကျ သငျ့ရဲ့ စိတျကို ရိုကျခြိုးလိုကျဖို့က ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ ….. ။
6-ကတိတခုကို လှယျလှယျပေးပွီး လှယျလှယျဖကျြတတျသူမြိုးဖွဈပါတယျ။သူတို့ဟာ ဘဝအတှကျ အရေးပါတဲ့ကတိကဝတျတှကေို မိနဈပိုငျးအတှငျး အဖွပေေးတတျပါတယျ။ဒါဟာ ဉာဏျကောငျးလှနျးလို့ မဟုတျပဲ လေးလေးနကျနကျမရှိခွငျးသာဖွဈပါတယျ …… ။
7-ကိုယျ့လငျယောကျြားထကျ တခွားသူတှရေဲ့ ဂရုစိုကျမှုကို ပိုလိုခငျြသူတှကေိုလညျး ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။မတူညီတဲ့ ဖကျရှငျပွောငျးလဲခွငျး သငျနဲ့ လိုကျလြောညီထှမေနခွေငျးနဲ့ သငျ့ခံစားမှုကို အလေးအထားခွငျးတှဟော သငျ့အတှကျ လကျတှဲဖျောကောငျးဖွဈလာစမှောမဟုတျပါဘူး …… ။
8.အတငျးပွောတတျသူ အမြိုးသမီးတှကေို ရှောငျပါ။မြားသောအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးတိုငျး နောကျကှယျက အကွောငျးတခုကို သာမာနျထကျပိုပွီး စပျစုလိုစိတျရှိပါတယျ။ဒါဟာ ပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ဒီထကျပိုလာရငျတော့ ပွဿနာဖွဈလာနိုငျပွီး မလိုအပျတဲ့ မနာလိုစိတျတှနေဲ့ သူတပါးမကောငျးကွောငျးသာ နစေ့ဉျနဲ့ အမြှ တှငျတှငျခါအောငျ ပွောသူဆို သငျ့အတှကျရော သငျ့မိသားစုအတှကျပါ အဆငျမပွဖွေဈလာနိုငျပါတယျ …… ။
Previous: နာမည် ကြီးနေတဲ့ တောင်ငူနယ် ရွာလေးတစ်ရွာ၏ ဒုလ္လဘကိုရင်ကြီးများ ဆွမ်းစားပင့်ခြင်း ဓလေ့ (ရုပ်သံ)
Next: ဇလုံတောင် ​တောင်တက်ဘုရားဖူကား ဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက်ပြီး ၃ ဦး​နေရာတွင်​​သေဆုံး….